Imikhuba Yezenhlalo Yezenhlalo ye-B2B
Imikhuba eyi-10 Yezokuxhumana Yezentengiso ye-B2B
NgoMsombuluko, Disemba 6, 2010 NgeSonto, Okthoba 19, 2014 Douglas Karr
Ngo-Agasti, I-Softchoice bathumele ucwaningo kumakhasimende abo futhi bathola izimpendulo ezigcwalisiwe eziyi-1,444 ezimele ngaphezu kwamabhizinisi ayi-1,200 amancane naphakathi (SMB), amabhizinisi, imikhakha yomphakathi kanye nezinhlangano zemfundo. Abangu-71% abaphendulile babekwi-IT kanti isampula ngokuyisisekelo lalingamaphesenti angama-50 e-US namaphesenti angama-50 ezinhlangano zaseCanada - abamele kakhulu indawo yebhizinisi laseNyakatho Melika.
Esinye isici sesethulo okufanele sikhamuluke ukumelelwa kweWordle kwamazwi: Okuqukethwe okuphathelene nesikhathi lokho kudinga bamba inzalo futhi ube kubhalwe kafushane!
Nayi eminye imininingwane evela kokutholakele:
Tags: b2bukumaketha kwe-b2bImfundoibhizinisi lebhizinisiitUMari Smithibhizinisi eliphakathi nendawoUmsakazo we-MTBkwezomphakathiUkuthengisa UkubudlelwaneIbhizinisi elincanesmbisoftchoiceUcwaningoimiphumela yokuhlola
Aw, heck. Ngicabanga ukuthi ngizoqala ibhizinisi lokumaketha!
Ukubikezelwa kukaGartner kweTop 10 Technologies yango-2011
Dec 29, 2010 ku-3: 22 AM
UDoug, lesi bekuyisifinyezo esisebenzisekayo sesilayidi kanye nokuvuselelwa kwevidiyo ocwaningweni lukaSoftchoice (yize bengizizwa ngathi 'ngibhastiwe' ngokukhetha kwabo indawo lol)
Kwesinye isikhathi ngiyazibuza ukuthi zingaki izinkampani ezinkulu ezivumela ukufinyelela ku-FB naku-Twitter kusuka kuma-desktops / laptops wabasebenzi. Kunezinkinga ezahlukahlukene zokuphepha, izingozi zokuhlonishwa kanye nokuhweba kokukhiqiza okufanele kwenziwe ngokwenza njalo. Mhlawumbe lokho kubangela ukutholwa okwandayo kwamafoni smart ukufinyelela kulawa mathuluzi, lapho engavaliwe yizikhubekiso ze-Intanethi 'zendabuko'?
Kusukela kusifinyezo se-slideshare ngithathe ithiphu # 8 njengokukhuluma ngokusobala kakhulu ekubukweni komhlaba okugxile emikhiqizweni yabathengisi be-b2b tech. Izimpendulo eziyisikhombisa ezicashunwe zibhekise kwimilayezo yokukhangisa ethunyelwa nge-imeyili, kepha futhi ingasetshenziswa cishe kunoma iyiphi enye indlela yokuthengisa okuqukethwe esiza ukufundisa nokukhulisa ubudlelwano bebhizinisi obungenzeka nomuntu ophilayo wangempela. Khumbula labo!
Njengoba amafoni ahlakaniphile (namathebulethi) anda ezweni lezinkampani, kubukeka sengathi izingcezu ezimfushane, ezihehayo ze- "infographic" zingaba yindlela ekhethwayo yokuheha izinkophe zamehlo nezindlebe ekushintshisaneni ngolwazi olulinganisiwe noluningiliziwe isib ama-webinar nokusekela okuqukethwe okubhaliwe.
Kuningi okufanele ucabange ngakho. Siyabonga ngokwabelana.